किन डिप्रेशनमा पुगे कपिल शर्मा « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
किन डिप्रेशनमा पुगे कपिल शर्मा
एजेन्सी – वर्षौंसम्म कमेडी माध्यमद्वारा जनजनको मनमा बास गर्न सफल कपिल शर्मा हिजोआज एउटा फरक युद्ध लडिरहेका छन् ।
एक बेला सफलताको शिखरमा पुगेका यी कलाकार हिजोआज विवादको घेरामा परिरहेका छन् । विगत दुई सातामा उनका दुई टिभी शो बन्द भएका छन् ।
जुन कलाकारको साथ पाएर उनी कमेडी दुनियाँमा छाएका थिए ती अधिकांश अहिले उनीबाट टाढा भएका छन् । एक पत्रकारसँगको उनको झगडाको विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ । र उनी मानसिक रोगसँग नराम्रोसँग जुध्न बाध्य छन् ।
बलिउड स्टार हुन् वा क्रिकेटका हस्ती एक समय उनको शोमा आउन सबै लालायित रहन्थे । उनको टिभी शोको टिआरपीले आकाश चुमेको थियो ।
अभिनयको दुनियाँमा उनको भाग्य उदाइरहेको थियो । त्यस्तो के भयो आखिर अहिले कपिल शर्मा एकाएक गुमनाम हुँदै गएका छन् ? उनको परिचय नराम्रो बन्दै गएको छ र कार्यक्रमहरु बन्द भएका छन् ।
उनका साथी कलाकारहरुका उनीबारे फरक फरक धारणा छन् । कोही भन्दैछन्, कपिलले जे रोपेका थिए त्यही फल्दैछ । कोही भन्दैछन् कपिलका नराम्रा दिन सुरु भएका छन् र सबैका जीवनमा यस्तो उतार चढाव हुन्छ ।
कपिल शर्माको कमेडी शोमा बुआको भूमिकामा देखिने उपासना सिंह भन्छिन्, ‘फिल्म उद्योगमा प्रत्येक कलाकारको फेज हुन्छ । एक बेला उसँग धेरै काम आउँछ । अर्को समय कामबिहीन पनि हुन्छ ।’
सफलता धेरै विवाद लिएर पनि आउँछ । जानकारहरु भन्छन् कपिल त्यतिबेला धेरै अप्ठ्यारोमा परे जतिबेला गत वर्ष सुनिल ग्रोवरसँग उनको झगडा भयो ।
सुनिलसँगै धेरै कलाकार उनको साथबाट अलग भए । कपिलले सायद यो सोचेका थिएनन् कि सुनिलसँगको झगडाको मूल्य यो हदसम्म हुनेछ ।
सुनिल ग्रोवर तथा अरु कलाकारले शो छोडेपछि कपिलले सोनी टिभीको आफ्नो कार्यक्रम द कपिल शर्मा शोमा धेरै प्रयोग गरे । तर ती कुनै सफल हुन सकेनन् ।
त्यतिबेला कपिल शर्माको फिल्म फिरंगी आउनेवाला थियो । उनलाई फिल्मले राम्रो गर्ला भन्ने ठूलो भरोसा थियो । फिल्मले नयाँ इतिहास रच्नेछ र आलोचकलाई जवाफ दिनेछ भन्ने उनको आशा थियो । तर त्यस्तो भएन ।
कपिलको फिल्म फ्लप भयो र शोबाट विदा लिने उनको रणनीति पनि गलत सावित भयो । दोस्रो पटक शो लिएर आउँदा उनी टिभीमा देखिएनन् । त्यसपछि पत्रकारसँग झगडा एवं गालीगलौज तथा विवाद सुरु भए । अहिलेसम्म आउँदा शो बन्द भइसकेको छ ।
कपिल शर्माको मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको कतिपयको बुझाइ छ । उपासना सिंहको भनाइमा उनी डिप्रेसनमा परेका छन् । ‘कपिललाई फिल्म फ्लप भयो । शो पनि पहिला जस्तो हिट भएन ।
त्यसपछि झैझगडा सुरु भयो । उनी प्रेसरमा आए । सबै विषयलाई सम्हाल्न सकेनन् । उनी शारीरिक तथा मानसिक हैरानीमा छन् । उनी डिप्रेसनमा गएका छन्’, उनी भन्छिन् ।
कपिललाई आफ्नो भाइ मान्ने उपसनाका अनुसार उनी खुला हृदयका मानिस हुन् । ‘कपिल मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएका हुन् । उनको एउटा यस्तो विशेषता छ कि उनले सबैको ख्याल गर्छन् ।
मनका सफा छन् । जे उनको मनमा हुन्छ भनिदिन्छन् । उनलाई रिस, थकाई लुकाउन आउँदैन् । यसैले गर्दा उनी धेरै ठूलो समस्यामा परेका हुन् । उनी मान्छे हुन् भगवान् होइनन्’, उनले भने ।
लाफ्टर च्यालेन्जदेखि कपिलका मित्र रहेका सुनिल पउल उनलाई दिलादार व्यक्ति ठान्छन् । कपिललाई विवादमा तान्नु षड्यन्त्रपूर्ण भएको उनको ठम्याई छ ।
सुगन्धा मिश्र कपिल शर्मा शोको एक मुख्य पात्र हुन् । एउटै कलेजमा पढेका उनीहरुमध्ये कपिल सिनियर हुन् । जब लाफ्टर च्यालेन्जको चौथो सिजनमा महिला प्रतियोगीको खोजी भयो त्यतिबेला कपिलले सुगन्धा मिश्राको नाम सिफारिश गरे ।
सुगन्धाको परिवार उनलाई मुम्बई पठाउन राजी थिएन । त्यतिबेला कपिलले उनको परिवारलाई सम्झाए तथा विश्वास दिलाए। त्यसपछि मात्र सुगन्धा मुम्बई पुग्न सकिन् ।
अहिले उनी कपिलको सम्पर्कमा छैनन् । उनले स्पष्ट पारिन् व्यक्तिगत रुपमा कपिलसँग केही रिसराग छैन । कपिललाई दाई मान्ने उनी अहिले सुनिल ग्रोवरसँग नयाँ शो दे दना दनमा काम गरिरहेकी छिन् । यदि कपिलले शोमा बोलाए आफू जाने उनी बताउँछिन् ।
लामो समयसम्म कपिल शर्माको प्रबन्धक रहेकी प्रीति सिमोन भन्छिन्, ‘एक व्यक्ति जो नम्बर वान पोजिसनमा थियो । ऊ त्यहाँ कसरी पुग्यो ? यसका कारणहरुबारे लेख बन्दैनन् । म कपिललाई जान्दछु ।
उनी राम्रा कलाकार हुन् । आफ्ना जीवनबारेका निर्णयहरु, फिल्म बनाउने इच्छा, शो गर्ने चाहना, विवाह यी सबै फैसला उनका थिए । यदि आफ्ना निर्णयहरु नै दुःखका कारण हुन् भने तीमाथि सोच्नुपर्छ । अरुलाई दोष दिएर के फाइदा ?’ प्रीतिका अनुसार उनीसँग रहुन्जेल कपिल ठिकठाक थिए ।
यतिबेला कपिल मुम्बईभन्दा बाहिर छन् । उपसनालाई लाग्छ यतिबेला उनले परिवार र नातेदारसँग समय बिताउन जरुरी छ । उनको विश्वास छ केही समयपछि सबै झै झगडा सुल्झिनेछन् र कपिल डिप्रेसनबाट बाहिर आउनेछन् ।